प्रत्येक व्यक्ति, यस्तो समस्या सामना साधारण चिसो रूपमा। यो रोगी र अरूलाई असुविधा को धेरै हुन्छ। को भडकाऊ प्रक्रिया दुखाइ, र लगातार छुट्टी सँगसँगै छ। केही अवस्थामा त्यहाँ तापमान मा वृद्धि हुन सक्छ। किनभने नाक भीड कठिनाई साँस र निद्रामा को भङ्ग गरिएको छ। फलस्वरूप, मान्छे पर्याप्त निद्रा प्राप्त र यो पनि अधिक देखि ग्रस्त छैन।
साधारण चिसो को उपचार अक्सर विभिन्न प्रकाशनहरू मा वर्णन गरिएको छ। यसलाई पारंपरिक हालतमा र परम्परागत चिकित्सा गर्न रिसोर्टमा द्वारा बाहिर गर्न सकिन्छ।
हाम्रो बच्चाहरु - दुर्भाग्यवश, साधारण चिसो र सबैभन्दा छन् साना ग्रस्त छ। र व्यर्थमा - धेरै आमाबाबुले लागि, यो छैन चासो को लागि एक कारण हो। छोराछोरीको शरीर अझै पनि एकदम नाजुक र चाँडै भाइरस हटाउन सक्दैन। फलस्वरूप, पनि एउटा सानो दुखेको यदि यो समयमा निको छैन एक ठूलो समस्या बन्न सक्छ। विशेष मा, चिसो नाक र घाँटी रोग हुन सक्छ। र एक डाक्टर मदत खोज्न छैन, तपाईं बच्चा पुरानो रोग इनाम जोखिम।
एक बच्चा मा साधारण चिसो को उपचार एक वयस्क को उपचार देखि केहि फरक छ। बच्चाहरु धेरै लागूपदार्थ छैन दिनुपर्छ। साथै, थुप्रै स्प्रे छैन उपचार गर्दै छन्, तर केवल राहत को सुनिंनु र सजिलो सास बनाउँछ सम्झना। अधिमात्रा मा विषाक्तता को एक जोखिम पनि छ। यस सन्दर्भमा, यो हाम्रो आमा र हजुरआमा को ज्ञान र सीप लागू गर्न उपयोगी छ।
बच्चाहरु लोक उपचार मा साधारण चिसो को उपचार :
धेरै घर धेरै उपयोगी बोट हुर्किसकेका - घ्यु। यसको रस बलियो विरोधी भडकाऊ कार्य छ। यो संक्रमण र लडाई जीवाणु भाइरस जलाएर सक्षम छ। प्रत्येक नथना मा रस मात्र चार थोपा पीडित तपाईंको बच्चा सुरक्षित हुनेछ। प्रक्रिया एक दिन धेरै पटक गर्न सकिन्छ।
समय समयमा nostrils आसपास क्षेत्र मालिश।
एक कमजोर नुन समाधान (प्राथमिकताको समुद्री) तयार र2थोपा मुर्दा गाड्नु। यो सुनिंनु कम र कीटाणुरहित हुनेछ। समाधान आयोडिन केही घटेको थप्न हुन सक्छ। एक वर्ष मुनिका बच्चाहरु मा साधारण चिसो को उपचार यसरी बाहिर गर्न सकिन्छ। यो अघि स्तन-खुवाउने (मिश्रण) गर्नुपर्छ।
ताजा तयार चुकंदर रस र पानी 1 यो पतला: 1। यो धेरै ध्यान गर्न आवश्यक छ प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो बच्चा एक mucosal घाउ वा गम्भीर सुनिंनु छ भने, यो बेचैनी र जलिरहेको हुन सक्छ। आफैलाई लागि पहिलो प्रयास गर्न, र त्यसपछि बच्चा दिन राम्रो छ।2थोपा लागि आवश्यकता3पटक एक दिन Bury।
हरेक आधा पानी 1 पतला गाजर को रस को 1-2 थोपा मुर्दा गाड्नु: 1। उहाँले चुकंदर रस भन्दा अलि नरम, तर कुनै कम प्रभावकारी कार्य।
उत्कृष्ट साग रस मद्दत गर्छ। ताजा पात RUB pestle, cheesecloth र निचोड मा भेला हुन्छन्। परिणामस्वरूप तरल3घटेको3पटक एक दिन डाले थियो। यो उपकरण धेरै छिटो काम गर्छ। तपाईं यसलाई एक पंक्ति मा कुनै थप2दिन भन्दा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
rhinitis उपचार एरोमाथेरापी को मद्दतले बाहिर गर्न सकिन्छ। सफा कपडा मा केही घटेको लागू मसलाको तेल र headboard मा झुन्डियो। आफ्नो बच्चा एलर्जी छैन निश्चित गर्नुहोस्।
कुल्ला नाक सोडा वा chamomile को समाधान हुन सक्छ। यो एक दिन 3-4 पटक गरेको छ। तेल टोंटी वा श्लेम लाग्एको एक विशेष क्रीम यो ब्रश पछि सूखे बाहिर छैन।
नियमित हरेक घण्टा, नाक कुल्ला नुनखरा। खकार बल्ब हटाउन आवश्यक छ।
rhinitis उपचार धेरै तरिकामा बाहिर गर्न सकिन्छ, ती संयुक्त गर्न सकिन्छ। कुनै खकार को चुच्चो मा रहेको सुनिश्चित गर्न ध्यान हेर्नुहोस्। यो नासपाती र नैपकिन हटाउन सम्भव छ। instillation समयमा आफ्नो औंला एक नथना छोप।
कुनै मामला मा बच्चालाई नाक मुर्दा गाड्नु एक ब्लोअर प्रयोग नगर्नुहोस्। बच्चाहरु, पनि धेरै छोटो मा Eustachian ट्यूब। को चुच्चो देखि तरल प्राप्त गर्न सजिलो छ र otitis मिडिया र otitis मिडिया हुन सक्छ।
लक्षण र उपचार: केटाकेटीलाई Enterovirus
हात अन्तर्गत लसीका बिन्दुहरुको सुनिंनु
कसरी बच्चा मा तीव्र laryngitis उपचार गर्न? कारण, उपचार, हेरचाह।
परम्परागत विधि र दबाइ: सर्दी र उच्च रक्तचाप व्यवहार कसरी र के
Ebstein गरेको विसंगति: कारणहरू, लक्षण, निदान, उपचार
अजरबैजानी महिला नाम र आफ्नो अर्थ
आसाम भारतीय प्रान्त: यसको उत्पादन को टी - अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूको एक
अभिभावक राजधानी लागि एक घर खरीद: कागजात, सुविधा। आमा गरेको राजधानी अन्तर्गत एक घर किन्न ऋण
बलिङ कसरी खेल्ने? बलिङ उपकरण। बलिङ को नियम
हट - यो के हो? पर्वतमा क्षेत्रहरु मा घरहरू निर्माण को सुविधाहरू
उत्कृष्ट पेय एक कप प्राप्त गर्न कसरी राम्ररी कफी पीसने गर्न?
"Turbofon" 4G "नमूना" द्वारा: समीक्षा, विनिर्देशों
व्लादिमीर Sanin: पुस्तकहरु र जीवनी
जादुगर र jugglers बारेमा सबै भन्दा राम्रो चलचित्र: सूची
खरीद विदेशी कार। कार मा भन्सार कर्तव्य को गणना
कसरी लाइन गर्न कुंडा बाँध गर्न। घटक को विवरण